Iqoqo elikhulu le-China API 602 Forged Steel Globe Valve
INewway Valve Company ingumkhiqizi wamaphayiphu ochwepheshe we-API 602 Forged Steel Globe Valves, singakhiqiza ama-40000 sets API API 602 Forged Steel Globe Valves per Month. INewwayway Valve ineqoqo elikhulu lama-valve elenzela amakhasimende ukulethwa nganoma yisiphi isikhathi. Igama lomkhiqizo: kokuzihlanganisa Steel Glob ...
Indlela yokubumba kanye nencazelo yokusebenza kokupakisha kwe-valve
1. Incazelo yohlobo lwe-Graphite Packing Type Kunalezi zinhlobo ezi-3 ezilandelayo zokugcwaliswa okuvame ukusetshenziswa kuma-valve Ukupakisha okusetshenziswe kule phrojekthi wuhlobo olulodwa lokuvula ku-Figure 1 kanye nokupakisha okwenziwe ngendandatho kuMdwebo 3. Izithombe zangempela zimi kanje: Umdwebo 1 Uhlobo olulodwa lokuvula ukupakisha i-Fi ...
Ukulondolozwa nokufakwa esikhundleni se-API 600 Pack Valve packing
Indlela yokugcina yokufaka i-valve: Ukugcwaliswa kwale phrojekthi ikakhulu kuqukethe izinto ezimbili ezilandelayo: i-PTFE ne-graphite ethambile. Lapho igcinwa, ivalwa esikhwameni noma ebhokisini. Gcina kahle endaweni yokugcina impahla eyomile nenomoya, gwema ukukhanya kwelanga. Naka ukungena komoya ngesikhathi sokugcina isikhathi eside, kanye ne-contr ...
Kuhlelo lokuhambisa uketshezi, i-valve iyinto edingekayo yokulawula, ikakhulukazi enemisebenzi yokulawula, ukuphambukisa, ukulwa nokubuya emuva, ukusika, nokususa. I-valve isetshenziswa kakhulu emikhakheni yezimboni neyezomphakathi. I-valve yokushisa ephezulu uhlobo oluvame ukusetshenziswa kuma-valve. Ukucaciswa kwayo ...
Isimiso sokusebenza segesi ibhola kagesi
I-valve yebhola kagesi inesenzo sokujikeleza ama-degree angama-90. Umzimba weqhude uyindilinga enesiyingi ngembobo noma isiteshi esidlula eksisi yaso. I-valve yebhola isetshenziswa kakhulu kupayipi njenge-valve yebhola kagesi ukusika, ukusabalalisa nokuguqula ukugeleza kokuhamba kwaphakathi. Ku ...
Inkampani yeNewsway Valve ephezulu yokushisa ibhola iyisakhiwo sophawu lwensimbi, ifomu lokufaka uphawu kuyinsimbi kuya kusimbi yensimbi, indandatho yensimbi yensimbi ingavalwa, ipuleti lensimbi engagqwali kanye nendandatho yeplateite eyinhlanganisela yensimbi yensimbi. Ngaphezu kwedrayivu kagesi, uvemvane oluqinile ...
Imakethe yama-valve yezimboni isesimweni esihle kwikota yesine
Ezingxenyeni ezintathu zokuqala zonyaka we-2016, umnotho wezwe uqhubekile nokukhula ngokushesha, ngezinga lokukhula kwe-GDP elingu-11.5%, okunikeze imakethe ye-valve valve umkhuba omuhle. Kodwa-ke, umkhuba wokushisa ngokweqile komnotho uyaqhubeka, futhi kunezinkinga ezithile ezivelele ezingaguqula umnotho ube ngokweqile ...
Imiyalo yokuthenga ye-Stainless Steel 316 Ball Valve
INewwayway Valve Company 316 insimbi engagqwali yebhola levalve inezakhi zomzimba zamavelu ezimbili nezicucu ezintathu. I-flange ephakathi ixhunywe ngamabhawodi futhi uphawu lwenziwe nge-alloy-based alloy. Azikho izinsimbi ze-PTFE kuziqu zama-valve ezingenhla nezingezansi, kunciphisa ukungqubuzana nokusindisa abasebenzi ...
I-Flange Gate Valve Market Trend
Lo mbiko obizwa nge- “Global Flange Gate Valve Market” ungenye yezengezo ezibanzi futhi ezibaluleke kakhulu kwizinqolobane zocwaningo zemakethe zeNSW Research. Inikeza ucwaningo oluningiliziwe kanye nokuhlaziywa kwezici ezibalulekile zemakethe yomhlaba wonke ye-flanged gate valve. Umhlaziyi emakethe ngubani wro ...
I-API 602 GLOBE VALVENewswayway Valve CompanyI-API 602 globe valves inemiklamo emithathu yebhonethi. Eyokuqala ibhonethi yohlobo lwe-bolt, exhunywe yizindawo ezi-concave nezindilinga, kusetshenziswa amabhande ensimbi angenazinsimbi namabhasiketi enxeba agobekayo e-graphite spiral. Ukuxhumeka kwezintambo kungasetshenziswa njengoba kudingeka. I ...
I-Valve Gate Yensimbi Engagqwali Ingxenye yokuvula nokuvala ye-valve yensimbi engenasici yisango, futhi ukuqondiswa kokuhamba kwesango kubheke ngqo ekuqondeni koketshezi. Isango lensimbi engagqwali linezindawo ezimbili zokubekwa uphawu. Izindawo ezimbili zokuvala uphawu zemodeli esetshenziswa kakhulu ...
Incazelo nokuhlaziywa kwe-valve yebhola elintantayo yesandla
I-valve yebhola elenziwe ngesandla, i-butterfly valve ne-plug valve yohlobo olufanayo lwe-valve. Umehluko ukuthi ingxenye yokuvala ye-valve yebhola yibhola, elizungeza uzungeze umugqa ophakathi nendawo womzimba we-valve ukuze uzuze ukuvulwa nokuvala. I-valve yebhola isetshenziselwa ukusika, ukusabalalisa kanye nokushintsha ...
Yokusungula elikhulu China API 602 kokuzihlanganisa S ...
Indlela yokubumba nokusebenza kwe-dissiptio ...